लुम्बिनीमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा सत्ता गठबन्धनको जितपछि जे देखियो... :: नारायण खड्का :: Setopati
लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबार रिक्त हुन पुगेको तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचन भयो।
गणितको जोड घटाउ नियाल्दा पहिले नै सत्तारूढ गठबन्धनले जित्ने निश्चित भइसकेको थियो। पाँच पार्टी एकातर्फ र नेकपा एमाले एक्लै मैदानमा उत्रिएको थियो।
बिहान ९ बजेपछि दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम) ले पहिलो मतदान गरे। दिउँसो तीन बजे मतदान सकियो।
प्रदेश सभातर्फका शतप्रतिशत ८१ मत खसे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बहिस्कार गरेको हुँदा स्थानीय तहतर्फ २ सय १५ मतदातामध्ये २ सय १२ मत मात्रै खस्यो।
जित्ने निश्चित हुँदा पनि दुई जना बिरामीलाई गठबन्धनले लाखौं खर्चेर हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी मतदानमा सरिक गरायो।
नवलपरासी प्रतापपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अन्जुकुमारी चौधरी र पाल्पा रामपुर नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुदेवी उपाध्याय हेलिकप्टर चढेर मतदान गर्न दाङ आएका थिए।
मतगणना सुरू नहुँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश इञ्चार्ज तथा दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित संघीय सांसद मेटमणि चौधरी अदालत रोडको सडकमै प्लाष्टिकको टेबल राखे। त्यो टेबल नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा मास्क म्यानको परिचय बनाएका वीरबहादुर खत्री (वीरु)ले नि:शुल्क रूपमा मास्क, स्यानिटाइजर र मिनरल वाटर वितरणका गर्नका लागि राखेका थिए।
तर, निर्वाचन सकिएलगत्तै ती सामग्री वीरुले उठाइसकेको भए पनि मेटमणिले पुनः त्यसलाई सडकमा लगाए। त्यहाँ उनले खादा, माला, अबिरको प्रबन्ध गरे।
निर्वाचन सकिएलगत्तै सुरूमा प्रदेशतर्फको ८१ मत गणना भयो। केहीबेरमै त्यसको परिणाम मेटमणिलाई मेसेज आयो। उनी जोर घटाउमा लागे।
प्रदेशको नतिजा आएको आधा घन्टाजसोमा स्थानीय तहको नतिजा आयो।
त्यहीँ उनले जोड घटाउ सुरू गरे। १०६२ मतअन्तरले गठबन्धनका नेताहरू निर्वाचित भए।
मेटमणिले नै सबैको सामु निर्वाचन परिणाम घोषणा गरे।
निर्वाचन घोषणा हुनुभन्दा पहिला नै पाल्पाकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेलाई त्यहाँ निम्त्याइएको थियो। गैरेलाई मेटमणि लगायतले त्यहाँ अबिर माला लगाउँदै बधाई तथा शुभकामना दिए। त्यो क्रम केहीबेर चलेपछि त्यही भिडबाट गठबन्धनका अन्य उम्मेदवारको पनि खोजी हुनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो।
रूपन्देहीका राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्मा त्यही आसपासमा बसेर त्यो दृष्य हेरिरहेका थिए।
प्रदेश सभामा एक मात्रै र पालिकातर्फ चार जना मात्रै जितेको राजमोका खासै नेता कार्यकर्ता उपस्थित हुने कुरै भएन। कसैले उनलाई तानेर त्यही भिडमा ल्यायो। त्यसपछि गैर र विश्वकर्मा दुवैलाई अबिर, माला लगाउने तथा बधाई दिने क्रम चल्यो।
रमाइलो देखेर त्यहाँ कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता पनि आउन थाले। तर, त्यहाँ कांग्रेसका उम्मेदवार नदेखेपछि फेरि उनीहरूले खै हाम्रो मान्छे ? भनेर आवाज उठाए।
तर, नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित बाँकेका युवराज शर्मालाई केही दक्षिणमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले छुट्टै अबिर माला तथा खादा ओढाएर बधाई दिइरहेका थिए।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरी, लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सांसद शंकर गिरी, दाङ जिल्ला सभापति शंकरप्रसाद डाँगी लगायतका नेता/कार्यकर्ताले अलग्गै बधाई दिइरहेका थिए।
त्यही भिडबाट शर्मालाई कांग्रेस युवाहरूले गठबन्धनले जितेको हुँदा सँगै एकै ठाउँबाट अबिर, माला र बधाई साटासाट गर्दा राम्रो मेसेज जाने भन्दै तानेर लगे। त्यतिखेर केही कांग्रेस नेताहरूले 'हुँदैन' भन्ने भाव व्यक्त गरे पनि युवाहरू मानेनन्।
एक नेताले प्रश्न गरे थिए, ‘हामी ठूलो दल हो नि, उनीहरू यहाँ आउनु पर्‍यो नि, हामी किन त्यहाँ जाने ? हाम्रो यतिखेर मत पो मिल्यो, पार्टी त फरक हौं नि। मन कसरी मिल्छ?’
तै युवाहरूले तानेर शर्मालाई अरू दुई भएकै ठाउँमा लगे।
अब तीनै जना निर्वाचिन राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू एकै ठाउँमा थिए। तर, कांग्रेसका सबै नेता त्यहाँ खुसीयाली साट्न गएनन्। टाढै उभिएर हेरे मात्र। यो निर्वाचनमा माओवादीका कुनै उम्मेदवार थिएनन्। त्यसैले मतदानमा माओवादीका सबै जनप्रतिनिधि आए पनि मतपरिणाम पछिको उत्साहमा माओवादीका नेता कार्यकर्ताको भने खासै उपस्थिति थिएन।
माओवादीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पनि त्यहाँ आएनन्। जिल्ला नेताहरू पनि देखिएनन्।
त्यो बुझेर सुरूमै बोलेका शर्माले जय नेपाल, अभिवादन, लाल सलाम भनेर सम्बोधन टुंग्याए। अनि बल्ल भिडले ताली बजायो। दोस्रोमा बोलिन् राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित पाल्पाकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे।
उनको बढी आक्रोश नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको कदमप्रति थियो। उनले केपीको कदमलाई एक दलीय तानाशाहीको संज्ञा दिइन्। निर्वाचित तीन राष्ट्रिय सभा सदस्य लहरै उभिएका थिए। कांग्रेसबाट निर्वाचित शर्माले गैरे बोलिरहँदा धेरै पटक आफूले जस्तै जय नेपाल, अभिवादन र लालसलाम भन्न आग्रह गरे।
तर, गैरेले शर्माको आग्रह सुनेको नसुनेझैं गरिन्। उनले भनाइ टुंग्याउँदा लाल सलाम मात्रै भनेर टुंग्याइन्। त्यतिखेर कांग्रेसजनले ताली बजाएनन्। एकीकृत समाजवादीका नेता/कार्यकर्ताले मात्रै बजाए।
अन्त्यमा रूपन्देहीका राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विश्वकर्माको बोल्ने पालो आयो। मतभार नभए पनि गठबन्धनमा परी निर्वाचित हुन पाउँदा उनी औधी खुसी देखिन्थे। जसले भविष्यमा पनि गठबन्धन जारी रहनुपर्ने कुरामा जोड दिए। शर्माकै आग्रहमा विश्वकर्माले पनि अभिव्यक्तिको अन्तिममा लाल सलाम, अभिवादन र जय नेपाल भनेर टुंग्याए। त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित सबै रमाए। हुटिङ गरेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सत्तारूढ गठबन्धनले जितेको छ।
निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित शर्माले लामो समयदेखि आफू कांग्रेसको राजनीतिमा अनवरत लागेको स्मरण गरे।
उनले राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएपछि प्राप्त जिम्मेवारी इमान्दारिता र पारदर्शितापूर्वक पूरा प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीकी गैरेले गठबन्धनको जितले प्रतिगामीहरूको हार भएको तर्क गरिन्। उनले पछाडि परेका वर्ग र समुदायको लागि नीति निर्माण तहमा भूमिका खेल्ने बताइन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका विश्वकर्मा निर्वाचित भएपछि लामो बलिदानीबाट प्राप्त गणतन्त्र र संघीयतामाथि हुन थालेको प्रहार रोक्नको लागि गठबन्धनको जितले सहज तुल्याएको प्रतिक्रिया दिए।
उनले भविष्यमा पनि अहिलेको दलीय गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए।
जितपछि गठबन्धनका नेता/कार्यकर्ताले अबिर माला लगाउँदै खुसीयाली मनाएका थिए।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रका भएको थियो।
निर्वाचन अधिकृत ऋतेन्द्र थापाले मतपरिणाम अनुसार गठबन्धनका उम्मेदवारले ४ हजार ३ सय ७४ मत भार प्राप्त गर्दै निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै, प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उम्मेदवारका पक्षमा ३ हजार ३ सय १२ मतभार मात्रै पुगेको थियो।
तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्य छान्न ८१ प्रदेश सभा सदस्यले मतदान गरेका थिए भने स्थानीय तहका २ सय १३ मतदाताले भोट खसालेका थिए।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सत्तारूढ गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाएको थियो।
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १२, २०७८, ०९:१४:००